Kitaab – Wacdiyuhu noqo boqorka | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Gacaliyahaygu blog hantida akhristayaasha.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo daabaco aan kitaabkayga oo horyaalka waa isku mid sida blog « Return Daaciga Boqorka » waxaan ahay
Waxaad hore u dalban kartaa in Tifaftiraha « Edilivre » ka hor waa in buggaga
Title of Paper: « Wacdiyuhu noqo boqorka »
Kiristaanka ee bulshada waxaa dayacday, oo wuxuu allabari u bixiyey danaha humanism in magiciisa la odhan aan ogaanno in aan si tartiib tartiib ah waa « tirtirayaa » iyo in kaniisadaha waa la burburiyey. Waxaan ka heli kaca isla caadi ahayn Islaamka ee dunida oo dhan.
Haddii aad akhrido blog aan posts, waxaad og yihiin inuu kanu waa calaamadaha harbinger xoogan oo soo laabtay dhaw ah oo Rabbigeenna Ciise Masiix iyo King.
Oo sidaas daraaddeed sida badan badbaadaan, waa in aan sameyno wax kasta oo aan awoodno si ay u sameeyaan dunidu ku garato iyo in ay fahmaan in Ciise Masiix yahay King dunida oo uu dib ugu dhakhsaha badan waa in xukumi rag iyo quruumaha.
Taasi waa sababta aan u abuuray blog this oo si diiran u mahad celiyo booqo oo akhri articles aan.
Blog ayaa hadda soo booqday 500 jeer maalin kasta. Tani waxay la tixgelin karo guul dhab ah.
Laakiin, in aan ku filan si ay u sheegaan adduunka soo laabashada King Ciise Masiix iyo sidaasi darteed waxaan go’aansaday in ay qoraan buug si tirada u badan ma helitaanka internet lagu wargeliyo in qof kasta oo go’aan ka gaari kara naftiisa iyo qalbi jidka uu doonayo inuu raaco.
In bulshada madow, Rumaysad noo gelid iyo dad badan oo dareenka tagay by Ilaah, laakiin waxaan aad hubiso ma aha.
Ilaah marnaba naga Dhumeen, oo ku filan inuu noo jecel yahay in ay ogol yahay wiilkiisa waa kuwa Love saafi ah, u yimid dhulka oo waxaa la xumeeyay, caayay, karbaashay oo ugu dambeyntii xanuunsigayga u xun in iskutallaabta lagu qodbo, oo qodbay karoos baas by dhimasho oo na badbaadi.
Laakiin hoogtay aanu daadadku la baraya been ah, nebiyada beenta ah iyo ilaahyo been ah in dhibin aragga Ilaah iyo yeelan noo qaado xusus dhagar ahayn.
Sidaas waxaan rabay in aan kitaabkayga akhristayaasha keeno oo aayaad ah xad-dhaaf ah jiritaanka Ilaah iyo wiilkiisa madiga Ciise Masiix. Tani waa si ay dhammaan yihiin « Mu’miniinta laakiin sachants » dheeraad ah.
My buug muujinaysaa in ay tahay Ilaah oo abuuray koonkan iyo waxa ku jira.Waxa kale oo uu xaqiijinayaa ilaahnimadiisa Ciise Masiix iyo in dhulka uu ka soo laabtay dhaw.
Inkasta oo aan la kitaabka taariikhda ama sayniska, inuu nin ee safarka ka aasaasey sharxayaa in ay ku soo laaban ee Garden of Eden boqortooyada Ciise Masiix oo uu aadayo mustaqbalka ah nin ka dib markii boqortooyadii u ah Ciise Masiix.
Waxa kale oo ay ku qeexan yihiin waxsii of jeer dhamaadka ah oo kuu ogolaanaya in aad ogaato ugu badnaan filasho soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix our.
Waxaa muhiim ah iyo xitaa lagama maarmaan ah in nasasho nolosha qaadan inay gacanta ku dhigaan wixii muhiim ah oo lagama maarmaan ah in nolosha. Tani waa waxa aan ugu yeedhi inaad waxaas u yeeshid by aan kitaabkayga akhriska.
Ciise Masiix ugu soo laabtay dhakhsaha badan si ay u xukumaan rag iyo quruumaha, waa hubaal laakiin maalmaha hore mid aad u adag ayaa weli garaacid dhulka iyo aadanaha. Akhriya Kitaabka aad diyaarin kartaa in ay la kulmaan kuwaas oo xilliyo adag oo weli aan u leeyihiin in ay ka gudbaan.
Hagaajinaya Deedadka kuu ogolaanaya in aad si loo xaqiijiyo in dhibaatooyinkoodii oo dhan waa la joogto ah u koraya dhowr sano. Laakiin waxaan nahay sharaxaad iyo waa kitaabka.
Waxaan idiin ku yeedhi ma aha oo kaliya in akhriya Kitaabkayga laakiin sidoo kale si ay u yaqaan si dheeraad ah ka akhriyi kartaa oo ay ogaadaan in runta ma aha mid dhab ah maalin aan u sharxay bulshada Cilmaaniyadda.
Dhamaanteen inoo askari oo Ciise Masiix, waxaa na saaran waajib Christian oo ay ka yeelno oo ka shaqeeya in ay soo bandhigi eraygii wanaagsanaa « Ciise Masiix ugu soo laabtay dhakhsaha badan »
Dhammaan badbaadi kara haddii ay yimaadaan si ay Masiixa aasannay baabtiiska iyo in toobaddii.
Waa in ay inoo samee wajihi xaqiiqooyinka iyo in ay ogaadaan in aanu ku nool nahay adduun ee muddo dhowr sano u adag yahay sida shakhsiyaad.
Kuwani waa duubteen maalin iyo masiibooyinka dabiiciga ah sida roobab mahiigaan ah outsized, daadadka, duufaanada, masiibooyinka, dhulgariir, duufaanada, duufaanaha, dab, qarax buureedyada.
Laakiin sidoo kale waa sanad kasta muddo dhowr sano ah oo aan wax dhimasho ah oo loo yaqaan halkii milyan sababtoo ah kalluunka, shimbiraha, xoolaha iyo xayawaanka duurjoogta ah oo dhan caalamka.
Waxay kaloo ay dagaallo iyo dhawaaqyada wayn ee dagaalka adduunka ah, rabshado, luminta qiyamka iyo anshaxa.
Oo waxaa sidoo kale xag-jirnimada ay faraha iyo xag-jirnimada Islaamiga ah oo jiriin Xasuuqay xubno ka mid ah dadka Christian oo ay fageen, kharribaad, gubidda iyo burburinta kaniisadaha.
Aan xuso hoos u dhac weyn ee Kaniisadda Catholic wadaaddada.
Si aad u shar leh oo dhammu waa in aan ku darno burburinta caalamka in ay degeen dunida tan iyo markii shil suuq ee September 29, 2008, keenaya gaajada iyo murugo meel walba, saamaynta uu yahay oo dhan ka muhiimsan sida dadka dunida ku kordheen tan iyo laba iyo nus bilyan deggan ee 1950 in ka badan toddoba bilyan sanadkii 2012, 63 sano oo keliya.
Xitaa Vatican kii Quduuska Fiiri ee Church Catholic waxa uu noqday meel urayaan meeshii Ciise Masiix waxa uu noqday siyaada ah oo fudud ama xoogaa yar oo Museum ee Vatican.
Waxaas oo dhan waxaa lagu sharaxay kitaabka.
Dhammaan i yaqaana ogahay in aan marnaba ilaa siin, maxaa yeelay, buurta lahayn waa laga gudbi karin oo waan sii wadi doonto in ay u dhaqmaan si ay u bishaaree badan noqosho fiican u dhaw Ciise King Masiix.
Kuwa doonaya in ay ogaadaan qofka aan ahay:
Halkan si kooban qayb yar oo aan Biography.
Wiilka koronto ah Portuguese u haajireen France sanadkii 1957, waxaan ku koray waxbarashada Catholic, qaabkii, wehelnimada iyo Joc (Christian Shaqaalaha Young).
Waxbaridda Tani waxa uu iga dhigay nin heer Christian.
Waxaan had iyo jeer isku dayay iyo sidoo kale ayaan ahaa awoodaan in ay nolol caafimaad ee jacaylka Ilaah iyo ixtiraamka shuruucda ay (iyagoo aan weli ah!)
Waa in aan idhaahdo, maaddaama aan carruurnimada Ilaah ayaa had iyo jeer qayb ka ah nolosha. Isagu waa kalsooni, saaxiib, la-taliye iyo gargaarka lagama maarmaan ah ee nolol maalmeedka.
Inta lagu guda jiro qayb ka mid ah aad u dheer oo noloshayda waxaan lahaa shaqo aad u adag oo dhib badan oo Ilaah ku sameeyey calaamooyin badan si ay ii sii nooleeyo mustaqbalkiisa ciyaareed tan halista ah.
Sidaas daraaddeed waxaan u lahayn sirta Eebe iyo waxaan kalsooni buuxdana oo buuxda isaga.
Ilaah jacaylkiisii ​​ii joogto ah oo i siinaysaa uu caawiyo nolol maalmeedka.Runtii waxaan idinku leeyahay in ay tahay farxad saafi ah in ay dareemaan jecel iyo caawiyay by Ilaah.
Sidaas daraaddeed waxaan doonayaa inaan halkaas sidoo kale in ay Ilaah ku qiyaasay kuwa is-hoosaysiiya yar oo goob joog inay noo jecel iyo soo laabashada dhaw in Earth ah wiilkiisa madiga Ciise Masiix.
Sanadkii 2009 by fursad kadsoomid waxaan ogaaday in aan ku noolaayeen jeer ka soo daahay kitaabiga ah in lagu qabanyo ayaa ku soo laabashada Ciise Masiix.
Dabcan wanaagsan Christian aan bartay sidoo maalin qaabkii ugu soo dhammaadka wakhtiga dunidu ku doonaa oo Ilaah maalintaas soo laaban doonaa si uu u xukumo aadanaha oo dhan.
Ka hor inta indheer aqbali soo laabashada Ciise Masiix ayaa waxaa si fiican loo qorsheeyay qarnigeennan, waxaan inta badan la falanqeeyay oo weli dhammaan calaamadaha sheegid ku dhawaaqay jeer dhamaadka iyo soo laabashada Ciise Masiix on Earth.
Ugu dambayntii waa aan lahaa si ay u tagaan caddeyn ah oo ka raadso in dhammaan calaamadaha iyo waxsii sheegista ah ee times dhamaadka Herald soo laabashada Ciise Masiix dhammaatay maalin kasta iyo in ay tani si kasta oo ay noqon kartaa kadis ah sida badan oo ka mid ah waxsii sheegyada dhammaado ayaa la ahayd muhiim.
Tani waxa ay si qoto dheer noloshayda iska beddelay oo sidaasi darteed waxaan go’aansaday in la abuuro blog this « Return Daaciga Boqorka » taas oo aan la daabacay maqaalo badan oo ku qoran luqado oo dhan oo ay ku war aadanaha oo dhan dhacdadan cajiibka ah iyo sidoo kale qayb ka baraaruga dunida Christian si qof walba si ay u soo laabashada Rabbigeenna Ciise Masiix iyo King, ina Ilaah oo keliya oo diyaarin kartaa maankiisa iyo naftiisa.
My buug ujeedadiisu tahay si ay u muujiyaan akhristaha jiritaanka Ilaah, ilaahnimadiisa Ciise Masiix, si ay u sharxaan horumar ah ee nin si ay u noqdaan Ilaah iyo wargeliyaan tirada ugu badan ee soo celin cajiib ah taas oo ka mid ah ka Nasahanyahay Rabbigeenna Ciise Masiix uu kun-sano ah.
Waxaa jira markaas xaqiiq ahaan u Adduun apocalyptiga waa in Ciise Masiix dhaqso u soo laabanayn.
Waxaa muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la xasuusto in Ciise Masiix ayaa yiri: « Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha, ninna Aabbaha xaggayguu ku yimaado maahee. «
Haddii sidaas la sameeyo, ha idinku baabtiisi iyo dad badan oo u yimid inuu Masiixa si ay u badbaadaan.
Wax yar waxa ay noqon doontaa mid aad looga daahay oo waxaa jiri doona oo dhan in ka badan dhulka u ooyaa iyo ilmo ah oo dhan kuwii dambeeyay.
Waxaan weydiin idin raalli inay soo bandhigto aan kitaabkayga dhanba waalidiinta, saaxiibada, xidhiidhada, xiriirada iyo dhamaan shabakadaha bulshada oo dhan iyo inaad ogaataan oo wadaagno noqon jacaylka Ilaah iyo badbaadi.
Ilaah waa ina jecel yahay oo uu jecel Wiilkiisa keliya oo Ciise Masiix ugu dhakhsaha badan yahay inuu ku soo laabto dhulka u soo laabtay in ay Garden of Eden kuwa intay u timid oo dhan.
Heart Background waad ku mahadsan tahay wax kasta oo aad samayn, waayo, jacaylka iyo ammaanta Ilaah iyo Ciise Masiix!
Ilaah ha idiin barakeeyo oo kuu ogolaanaya in aad ku shaqayso mudo jacaylka iyo ammaanta Ciise Masiix.